जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) धनुषामा नेपाली कांग्रेसको प्यानल निर्विरोध चयन भएको छ । समितिको प्रमुखमा राजनन्द मण्डल राज निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
बुधबार जिसस प्रमुख, उपप्रमुखसहित सदस्यमा कांग्रेसको मात्र मनोनयन परेको थियो । धनुषाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेलका अनुसार जिसस उपप्रमुखमा सङ्गीतादेवी ठाकुर निर्वाचित भएकी छन् ।
यस्तै सदस्यहरूमा ईश्वरीप्रसाद शर्मा, डम्बरबहादुर थापामगर, फगु यादव, महिला सदस्यमा गीतादेवी यादव, विकादेवी मिजार, सोनितादेवी सदा र दलित तथा अल्पसङ्ख्यक सदस्यमा महेन्द्र महतो निर्वाचित भएका छन् ।
जिसस सदस्यमा पनि कांग्रेसको मात्रै उम्मेदवारी परेको थियो ।
भारतका १६ वर्षीय एक किशोरले अनलाइन खेल पबजी खेल्न नदिएको भन्दै आमाको हत्या गरेका छन् । यो घटना भारत लखनउको यमनापुरम कोलोनीको हो ।
उनका बुवा भारतीय सेनामा कार्यरत छन् । उनी जागिरको सिलसिलामा पश्चिम बंगालमा तैनाथ थिए । घरमा आमा र दुई बच्चा बस्थे । गत आइतबार बिहान ३ बजेतिर पबजीको लतमा रहेका छोराले आमाको हत्या गरे ।
प्रहरीले ती किशोरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ र घटनास्थलबाट क्षतविक्षत लाशसहित पेस्तोल बरामद भएको समाचार एजेन्सी पीटीआईले जनाएको छ ।
मंगलबार भने ती किशोर आफैंले घटनाबारे आफ्नो बुवालाई जानकारी गराएको समाचारमा उल्लेख छ । उनका बुवाले छिमेकीलाई भनेपछि प्रहरीसम्म सूचना पुगेको थियो ।
सुरुमा ती किशोरले घटनाको झुटो विवरण बताउने गरेका थिए । उनले घरमा आउने गरेका इलेक्टि्रसियनमाथि आरोप लगाउने गरेका थिए । तर अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनले आमाको हत्या गरेको स्वीकार गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
भारत सरकारले दुई वर्ष अघि चीनमा निर्मित ११८ मोबाइल एप्सलाई बन्द गराएको थियो । त्यसमा पब्जी पनि एक हो । पब्जीको पूरा नाम ‘प्लेअर अन्नोन ब्याटल ग्राउण्ड’ हो । यो गेम इन्टरनेटमार्फत् इन्ड्रोइड फोनमा चल्छ ।
भारतमा यो खेलको मोबाइल एप्स प्रतिबन्धित भए पनि डेस्कटप भर्जन उपलब्ध थियो । साथै यो खेल खेल्नेहरुले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर ७ र ११ लाई जोड्न ह्युमपाइप राखेर बनाइएको अस्थायी पुलमा क्षति पुर्याएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रकाश सापकोटाका अनुसार फड्केश्वरी भन्ने स्थानमा ह्युमपाइप राखेर बनाइएको स्थानमा बाढीले क्षति पुर्याएको हो । अहिले त्यहाँ डोजर प्रयोग गरेर मर्मत गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । मर्मतको काममा मेयर आइतमान तामाङसहितको टोली खटिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा अहिले पनि पानी परिरहेको छ र नदी तथा खोलाहरुमा पानीको सतह सामान्य बढेको छ । तर अन्य स्थानमा क्षति भएको विवरण भने नआएको सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले जनाएको छ ।
गत वर्ष जेठ मसान्तमा सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढी र पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो । फेरि बर्खायाम सुरु भएपछि स्थानीय त्रसित छन् ।
एमसीसीविरुद्ध विप्लवले गरे आन्दोलन घोषणा
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अमेरिकी परियोजना एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
मंगलबार नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयले भदौ २८ गते काठमाडौंमा बृहत सभासहित साताव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार बुधबार देशव्यापी कोणसभा, २५ गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, २६ गते एसीसी सम्झौता जलाउने र २७ गते सिट्ठी जुलुस गर्ने र एमसीसीका बेलुन उडाउने रहेको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारले यसै साता संसदबाट एमसीसी पारित गर्न षड्यन्त्र गरेको भन्दै राष्ट्रियतामाथि घात र वाक स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएपछि क्रान्तिकारी शक्ति आन्दोलित बनेको बताएको छ ।
सङ्खुवासभामा हत्या गरिएका ६ जनाकै शव परीक्षण गर्न धरान लगियो
सङ्खुवासभामा हत्या गरिएका एउटै परिवारका ६ जनाको शव परीक्षणका लागि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको छ ।
घटनास्थलबाट मुचुल्का उठाएर शव धरान लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । मादी नगरपालिका–१ खोला गाउँका तेजबहादुर कार्कीको परिवारका सदस्यको आइतबार हत्या भएको थियो । ५८ वर्षीय तेजबहादुर, ८४ वर्षीया आमा पार्वता, ५६ वर्षीया श्रीमती मनमाया, २८ वर्षीया बुहारी रञ्जना, १० वर्षीय नाति दीपक र पाँच वर्षीया नातिनी गोमाको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको थियो ।
घटनास्थलमा अहिले प्रहरी नायब उपरीरक्षक भीम दाहालको कमाण्डमा रहेको अनुसन्धान टोलीले तालीमप्राप्त कुकुरसहित अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीसहितको टोली पनि घटनास्थलमै छ।
हालसम्म घटनामा संलग्न दोषी पत्ता लाग्न नसकेको प्रनाउ सुवेदीले जानकारी दिए । उक्त क्षेत्रका विभिन्न नाका सिल गरेर हत्यामा संलग्नको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाले जनाएको छ ।
रोहितकुमार पौडेल र सोमपाल कामीको अर्धशतकीय साझेदारीसँगै नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पपुवा न्यूगिनीमाथि २ विकेटको जित हात पारेको छ ।
मंगलबार ओमानमा पपुवा न्यूगिनीले दिएको १३५ रनको लक्ष्य नेपालले ३९.३ ओभरमा ८ विकेट गुमाएर भेट्टायो । रोहित रन टाइ भएको अवस्थामा ४१ रन बनाएर आउट भएका थिए भने सोमपाल २२ रनमा अविजित रहे । यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पपुवा न्यूगिनीले ३३ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १३४ रन बनाएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका नेताहरूलाई सनाखत गर्न बुधबारका लागि बोलाएको छ। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई खनाखतका लागि आयोगले समय दिएको हो।
आयोगमा कोही उपस्थित सकेन र पत्रमार्फत् सनाखतका लागि आग्रह आएमा के गर्ने भन्ने आयोगले पछि निर्णय गर्ने उनले बताए।
भिडभाड गरेको भन्दै माधव नेपालहरू बसेको चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टलाई काठमाडौं प्रशासनको स्पष्टीकरण
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। निषेधाज्ञाका बेला रिसोर्टमा भिडभाड भएको भन्ने गुनासो आएकोले स्पष्टीकरण सोधेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए।
सोमबार बेलुकीदेखि चन्द्रागिरि रिसोर्टमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको छ। बुधबारसम्म उक्त बैठक बस्नेछ।
अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित सांसद र केन्द्रीय सदस्य गरेर करिब १०० जना नेताहरू चन्दागिरि हिल्स रिसोर्टमा बसेका छन्।
‘रिसोर्टमा भिडभाड भयो भन्ने गुनासो आएको छ, के भएको हो भनेर सोधिएको हो,’ प्रजिअ पराजुलीले सेतोपाटीसँग भने।
उनले रिसोर्ट प्रशासनलाई फोन गरेर निषेधाज्ञाका बेला भिडभाड भएकोबारे सोधेका थिए।
काठमाडौं प्रशासनले कोरोना संक्रमण जारी नै रहेको भन्दै निषेधाज्ञा लागु गरिरहेको छ। काठमाडौं प्रशासनकै एक अधिकारीले भने खोप लगाएको कार्डको आधारमा केही मानिस भेला हुन दिन सकिन्छ भन्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट सल्लाह तथा सुझावहरू आइरहे पनि प्रशासनले यो नियम भने लागु गरिसकेको छैन।
अफगानिस्तानबाट उद्धार गरिएका थप ७२ नेपाली आज बिहान स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरु आज बिहान ९ः१५ बजे कतार एयरवेजको जहाजबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका हुन् । अफगानिस्तानबाट लण्डन पुर्याइएका उनीहरुलाई लण्डनबाट दोहा हुँदै कतार एयरवेजको जहाजबाट आज बिहान काठमाडौँ ल्याइएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
‘उनीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर कोरोना परीक्षणलगायत प्रक्रिया पूरा गरी घर पठाइने छ’ उनले भने । मङ्गलबार दुई चरणमा गरी २०५ व्यक्तिलाई काठमाडौँ ल्याइएको थियो । जजिरा एयरलाइन्सको चार्टर्ड विमानबाट दिउँसो ११८ र राति ८७ नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए ।
कांग्रेस नेता धनराज गुरुङलाई मातृशोक
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य धनराज गुरुङलाई मातृ शोक परेको छ । नेता गुरुङकी आमाको ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।
नेता गुरुङले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत मंगलबार आमाको निधन भएको जानकारी दिएका हुन् । उनले भावपूर्वक लेखेका छन्, ‘आमा ! मलाई ठेस लाग्दा हजुरलाई दुख्ने थियो । मेरो दुःखमा हजुरको आँखा रसाउने गर्थे। पञ्चायती शासनका विरुद्ध लड्दा हजुरले मलाई ‘तिमी राजाको विरोधी भएका छौ रे ! मारी देला ! जोगिएर हिंड ! भन्नुहुन्थ्यो । ९२ वर्षको उमेरसम्म असीम माया र आशिर्वाद दिइरहनु भयो। तर आज स्तब्ध पारेर जानुभयो। आमा !!’
स्वर्गीय गुरुङको केही समयदेखि फोक्सोमा समस्या थियो । उपचारको क्रममा पोखरा स्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा आज निधन भएको हो ।
उहाँका ४ छोरा तथा १ छोरी मध्ये छोरीको यस अघि नै निधन भइसकेको छ । स्वर्गीय गुरुङको गुरुङको दाहसंस्कार बौद्ध परम्परा अनुसार अर्जुनचौपारी २, लामडाँडामा भोलि मिति २०७८ भाद्र २ गते दिनको १ बजे अन्तिम संस्कार गरिने नेपाली काँग्रेस स्याङ्जाका कार्यवहाक सभापती कुमार रानाले जानकारी दिएका छन् ।
स्थायी घर स्याङजाको अर्जुनचौपारी गाँउपालिका वाड नं २ मा हो ।
नेपालमा वित्तीय अपराध र सरकारी कागजात किर्ते गरेर चार वर्षदेखि फरार काभ्रेका केदारप्रसाद ढुङ्गाना साउन ३० गते पोर्चुगलबाट नेपाल आइपुगे । ढुङ्गाना आफंै नेपाल आएको नभई सीआईबीको मुद्दामा फरार रहेका उनलाई इन्टरपोल प्रहरीले पोर्चुगलदेखि नेपाल ल्याएको हो । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला भुम्लु गाउँपालिका १ का ढुङ्गाना तत्कालीन एनडीइपी तथा हालको देव विकास बैंकको ठगी प्रकरणका अभियुक्त हुन् भने सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
नक्कली कागजात खडा गरेर ढुङ्गानाले तत्कालीन एनडीइपी तथा हालको देव विकास बैंकबाट २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका थिए । सो मुद्दा भने अहिले पनि उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
साउन ३० गते नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखाले ढुङ्गानालाई नेपाल ल्याएलगत्तै सीआईबीलाई बुझाएको थियो । त्यसलगत्तै साउन ३१ गते सीआईबीले ढुङ्गानालाई जिल्ला अदालत ललितपुरमा फैसला कार्यन्वयनका लागि पेश गर्यो । जिल्ला अदालत ललितपुरले १० वर्ष अर्थात् २०८८ साउन ३० गतेसम्म कैद सजाय भुक्तान गर्न र ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना भराएको प्रमाण पेश गर्न कारागार कार्यालय नख्खुलाई पत्र लेख्यो ।
यदि ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना नभरेको अवस्थामा २०९४ साल पुस २४ गतेसम्म थुनामै राख्न कारागार कार्यालय नख्खुलाई पत्राचार भएको छ । अहिले ढुङ्गानालाई नख्खु कारागारमा पठाइएको छ ।
प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न लुम्बिनीमा सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच छलफल हुँदै
२ भदौ, बुटवल । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले अवरोध गरेपछि स्थगित लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक सुरु गर्ने विषयमा छलफल गर्न सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबीच छलफल हुँदैछ ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बिहान ११ बजे विपक्षीसँग छलफलका लागि बैठक बोलाएको एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए ।
प्रमुख सचेतक ढकालले सांसद अजय शाही र विमला खत्रीलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेसम्म सहमति नहुने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ, बैठकमा जान्छौं,’ ढकालले भने, ‘तर हाम्रो दलका दुईजना माननीयलाई कारबाही नगर्दासम्म सदन चल्न दिन्नौं, हाम्रो बटमलइन यही हो ।’
यसअघि हिजो प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठक विपक्षी एमालेको अवरोधका कारण शुुरु भएको ६ मिनेटमै स्थगित भएको थियो । आज दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने कार्यसूची छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले दुई सांसदलाई कारबाही गर्न एमालेले बुझाएको पत्रबारे अध्ययन र कानुनी परामर्श भइरहेको बताए ।
नेकपा विभाजनपछि गत वैशाख १९ गते माओवादी केन्द्र रोजेकी विमला एमाले दाङ क्षेत्र नं. ३ (ख)बाट निर्वाचित एमाले नेता उत्तर कुमार वलीको निधनपछि सोही ठाउँबाट निर्वाचित भएकी थिइन् ।
विमलालाई पार्टीमा ल्याउन एमालेले निकै कसरत गरेपनि सफल भएको थिएन । वलीलाई साउन १५ देखि २० गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा बन्धक बनाएर राखेको आरोपसमेत लागेको थियो ।
शाहीले आफूलाई स्वतन्त्र सांसद भएकोले नेकपा एमालेको हृवीप नलाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले सत्ताबाट विपक्षमा जाने वित्तिकै एमालेले अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको बताए ।
ओलीले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्नेलाई अहिलेको अध्यादेश समर्थन गर्ने हक छैन : गगन थापा
२ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले संसद छल्दै अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् ।
अहिलेको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको समर्थन गर्ने भए केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेकोमा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सामाजिक सन्जालमा थापाले लेखेका छन्, ‘संसद अधिवेशन हठात अन्य गरेर संसद छल्दै अध्यादेश ल्याउनु गलत ! हिजो गलत, आज गलत, सधैं गलत, जसले गरे पनि गलत ।’
उनी थप लेख्छन्, ‘हिजो ओलीले ल्याउँदा गलत भन्ने, त्यसको विरुद्धमा उभिने कसैलाई पनि आज समर्थन गर्ने हक छैन/हुँदैन । समर्थन गर्ने भए त्यतिबेला विरोध गरेकोमा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ ।’
साथै उनले ओलीले ल्याएको अध्यादेशको समर्थन गर्नेहरुलाई अहिले अध्यादेशको विरोध गर्ने हक नभएको पनि बताएका छन् ।
‘गत वर्ष वैशाखमा यसरी नै संसद छल्दै अध्यादेश जारी गर्ने ओली सरकार, समर्थन गर्ने मण्डली वा अध्यादेशमा ल्याप्चे लगाउने राष्ट्रपति कसैलाई पनि आज यो अध्यादेशको विरोध गर्ने हक छैन÷हुँदैन । विरोध गर्ने भए त्यतिबेला गल्ती गरेका थियौं भनेर पहिला सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ ।’
माधव नेपालको नयाँ पार्टी : नेकपा एमाले समाजवादी
सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश मंगलबार नै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको छ । यद्यपि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न बाँकी छ ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरे लगतै नयाँ दल दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । ‘५७ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ । आज थप केही साथीहरु पनि आउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेश आएपछि दल दर्ता गर्छौं ।’
नेताहरुका अनुसार नयाँ दलको नाम नेकपा एमाले समाजवादी राख्ने तयारी छ । अरु केही नाम पनि विकल्पमा छलफल भइरहेको भन्दै ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, नेकपा एमाले समाजवादी नै फाइनल होला ।’
नयाँ दलको अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल रहनेछन् भने अरु पदाधिकारीबारे छलफल नै भएको छैन ।
अब दुई दिनमै सेयर कारोबारको राफसाफ
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २ दिन मै सेयर कारोबारको राफसाफ चक्र पूरा हुनेगरी सिडिएस एन्ड क्लियरिङको विनियम स्वीकृत गरेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट प्रणाली टी प्लस थ्रिबाट टी प्लस टुमा गर्नेगरी सिडिएस एन्ड क्लियरीङको विनियम स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।
“धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्यौट प्रणाली टी प्लस टु मा गर्ने बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रममा रहेको र सो कार्यान्वयनमा ल्याउन सिडिएस एण्ड क्लियरिङले आफ्नो विनियममा भएको हालको टी प्लस थ्रि लाई टी प्लस टु मा ल्याउने गरी संशोधन स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पेश गरेको थियो । सोही बमोजिम बोर्डले धितोपत्र कारोवारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट चक्र टी प्लस टु मा गर्ने गरी धितोपत्र कारोवार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९ मा सो प्रयोजनको लागि विनियममा संशोधन स्वीकृति गरेको छ,” बोर्ड एक सूचना जारी गर्दै भनेको छ ।
बोर्डले स्वीकृत गरेको उक्त व्यवस्था सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि।ले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा जनाएको छ ।
“धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट चक्र छोटिइ टी प्लस टु कायम भएसँगै धितोपत्रको तरलतामा बृद्धि भई बजार थप गतिशील हुने तथा लगानीकर्तालाई थप लगानीको अवसर प्राप्त हुने बोर्डको अपेक्षा छ,” नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो छोरी, बुहारी र सम्धीको पार्टी होइन, दस सिट ल्याएर देखाउनुस् ःओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई दस सिट ल्याएर देखाउन चुनौती दिएका छन् ।
पार्टी विभाजन भएपछि पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी पुगेका प्रधानमन्त्रीले आफूले नेतृत्व गरेको नेकपा छोरी, बुहारी, सम्धीको पार्टी नभएको बताए । उनले प्रचण्डलाई कटाक्ष गरेका थिए ।
उनले आफू सरकारको नेतृत्वमा भए पनि कोही एकजना आफन्तलाई कतै नियुक्ति नदिएको बताए ।
उनले ५० वर्षअघि देखि नै एकता–एकीकरणको अभियानको थालनी गरेको बताए । प्रचण्डलाई पनि काम लाग्छ कि भनेर पार्टीमा ल्याएको र ‘लाटोकोसेराले घाम लागेको बेला देख्न नसके’जस्तै सरकारले काम थालेको देख्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
नेकपाले प्रधानमन्त्रीलाई पठायो संविधानको पुस्तक र विरोधपत्र
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको पुस्तक र विरोध पत्र पठाएको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपाले संसद् विघटनविरुद्ध विरोधपत्र र संविधान पठाएको हो ।
नेकपा काठमाडौं जिल्ला कमिटी सचिव हिमाल शर्माले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पठाइएको जनाकारी दिए ।
नेकपाले दोस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत आज सबै जिल्लामा संविधान र विरोधपत्र पठाएर राष्ट्रका नाममा क्षमायाचना गरी संसद् विघटनको कदम सच्याउन आग्रह गर्दै छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प सत्ता हस्तान्तरणका लागि तयार
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व्यवस्थित सत्ता हस्तान्तरणका लागि तयार भएका छन् । उनले एक भिडियो सन्देशमार्फत यस्तो जानकारी गराएको बीबीसीले जनाएको छ ।
उनले व्यवस्थित सत्ता हस्तान्तरणका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।
अमेरिकी संसद् भवन (क्यापिटल बिल्डिङमा हिंसा भएको २४ घण्टापछि उनको धारणा आएको हो ।
उनले भनेका छन्, “मैले अमेरिकी संसद् (क्यापिटल बिल्डिङ)मा भएको हिंसाबाट सुरु गर्न चाहन्छु । बाँकी अमेरिकीजस्तै म पनि उक्त हिंसाबाट उत्पन्न परिस्थितिप्रति दुखी छु । त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था शान्त पार्नका लागि मैले तत्कालै सुरक्षा फोर्स तैनाथ गर्न निर्देशन दिएको थिएँ ।”
ट्रम्पले हिंसामा संलग्नहरु आफ्नो देशका नागरिक हुनै नसक्ने बताउँदै जसले कानुन तोडेका छन् उनीहरु कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने बताए । ट्रम्पले व्यवस्थित सत्ता हस्तान्तरणको लागि तयार रहेको बताएका छन् ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा जैविक इन्धनबाट चल्ने र्‍याम्प बस हट्ने
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जैविक इन्धनबाट चल्ने र्‍याम्प बस हट्ने भएका छन् ।
नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले विमानस्थल टर्मिनलबाट विमानसम्म लैजाने र ल्याउने बस विद्युतीय बनाउने व्यवस्था गर्न विमास्थललाई निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउन विमानस्थललाई भनिएको जानकारी दिए । तर, ती बस तत्काल हट्ने भन्ने नरहेको उनको भनाइ छ । बाह्रखरीसँग क्षेत्रीले भने, “विमानस्थलबाट जैविक इन्धनले चल्ने बस हट्छन् । त्यसका लागि कार्यविधि बन्नुपर्छ ।”
विदेशी विमानस्थलमा विद्युतीय सवारी मात्र प्रयोग हुन्छ । क्लिन इनर्जी अवलम्बन गर्न यस्तो तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।
वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरु भने तत्काल विद्युतीय बस राख्न नसकिने बताउँछन् । वायुसेवा सञ्चालक संघ योगराज कँडेलका अनुसार जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारी हटाउने काम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने बताउँछन् ।
यसबारे आफूहरुसँग विमानस्थलले छलफल गरेको जानकारी उनले दिए । तर, तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने जिकिर उनले गरे । कँडेलले भने, “कहिलेदेखि विस्थापित गर्ने भनेर पहिले कार्यविधि आओस् अनि छलफल गरौँला ।”
टेस्लाको सेयर बढेसँगै एलन मस्क बने विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति
बीबीसी । बिहीबार टेस्लाको सेयरमा अचानक ठूलो वृद्धि भएसँगै कम्पनीका मालिक एलन मस्कको कुल सम्पत्ति १८५ अर्ब डलरभन्दा धेरै पुग्दा उनी विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन् ।
यस्तोमा यो खबरको अनौठो प्रतिक्रिया दिएकाबारे पनि अहिले मस्कको चर्चा भइरहेको छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिबारे उनको विचार यस प्रकार रहेको छ, “मेरो आधाभन्दा बढी सम्पत्ति पृथ्वीका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि समर्पित छ र बाँकी आधाचाहिँ यदि, पृथ्वीसँग कुनै ठूलो तारा ठोक्किएर डाइनोसोर जसरी नै हाम्रो विनाशको दिन आयो भने या तेस्रो विश्वयुद्ध भएको खण्डमा हामी आफैँ विनाशतर्फ लाग्यौँ भने त्यस्तो परिस्थितिमा मानव जीवन जारी राख्न, मंगल ग्रहमा आत्मनिर्भर सहर सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नका लागि प्रयोग हुनेछ ।”
काठमाडौं । एफए कप फुटबलमा आज (शुक्रबार) लिभरपुलले एस्टन भिल्लासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । भिल्लाको घरेलु मैदानमा हुने दुई टोलीबीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति १स्३० बजे सुरु हुनेछ ।
एफए कपको तेस्रो चरणअन्तर्गत लिभरपुलले भिल्लासँग खेल्न लागेको हो । आजको खेलमा लिभरपुल सहज जितको अपेक्षामा हुनेछ । आजको खेलमा जित निकाल्न सके भिलरपुल अघिल्लो चरण प्रवेशका लागि उत्रनेछ ।
भिल्लाले भने आफ्नो यू–२३ को टिम भिरपुलविरुद्ध उतार्नेछ । टिमका खेलाडीहरुमा कोरोना देखिएपछि भिल्लाले युवा खेलाडी मैदान उतार्न लागेको हो । यस्तै लिभरपुलविरुद्ध मुख्य प्रशिक्षक डिन स्मिथसमेत मैदानमा देखिने छैनन् ।
काठमाडौं । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले विभिन्न संघ–संस्थाको समन्वयमा सडकबत्ती राख्न थालेको छ ।
कोटेश्वर–कलंकी सडकखन्डमा सवारी दुर्घटनाको संख्या बढेसँगै ट्राफिक महाशाखाले त्यसको कारण खोजी गरेको थियो ।
रातको समयमा सडकबत्तीको अभावले जेब्राक्रसिङ तथा जथाभावी बाटो काट्नेक्रममा दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहने पाइएकोले त्यस्ता स्थानहरुमा सडकबत्ती जडान गर्न थालिएको हो ।
उक्त सडकखन्डको बीएन्डबीअगाडि, स्टार अस्पतालअगाडि, सानेपा, बल्खु सुमोपार्क, खसीबजार, सीता पेट्रोपम्प, भालेश्वर अटो वर्कसप, कलंकीलगायतका स्थानहरुमा सडकबत्ती जडान गरिएको छ ।
यस्तै, बढी दुर्घटनाको जोखिम रहेका स्थानहरुमा रातको समयमा समेत टल्कने स्पिड ब्रेकर बनाई गति नियन्त्रण गरिएको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिए । उक्त सडकखन्डको विभिन्न १४ स्थानमा गति नियन्त्रण गर्न टल्कने कोणहरु राखिएको छ ।
स्थानीय संघ–संस्था तथा समाजसेवीहरुसँग समन्वय गरी सडकबत्ती जडान र टल्कने ट्राफिक कोण राख्न सुरु गरिएको महाशाखाका प्रवक्ता एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले बताए ।
प्रदीप नेपालको घरमा पुगेर माधव नेपालले भने–ओलीलाई सम्झाउनुहोस्ं
.काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेता प्रदीप नेपाललाई भेट्न उनकै घरमा पुगेका छन् ।
नेता नेपाल सोमबार साँझ गोठाटारमा पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार कुनै बेला घनिष्ठ सम्बन्धमा रहेका नेताहरू माधव र प्रदीप नेपालबीच लामै संवाद भएको थियो ।
भेटमा प्रदीप नेपालले पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाललाई ओलीसँग मिलेर जान सुझाव दिएका छन् ।
एउटै सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि र संघर्षबाट आएका नेताहरु मिलेर जानु नै उपयुक्त हुने बताएका थिए । विशेषगरी जनताको बहुदलीय जनवाद जबजका लागि पनि मिल्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसको वातावरण बनाउने बताए ।
माधव नेपालले भने समस्या आफूमा नरहेको जवाफ दिएका थिए । ‘एउटै पार्टीका नेताहरु किन नमिल्ने रु समस्या केपी ओलीमै छ’, माधव नेपालको भनाइ थियो । उनले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई सम्झाउन समेत नेता नेपाललाई आग्रह गरेका छन् ।
शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरुले प्रदीप नेपालसँग दुई नेता ओलीनेपाल मिलाइ दिन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका तीन सल्लाहकार विष्णु रिमाल, राजन भट्टराई र सूर्य थापा, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल प्रदीप नेपालको निवास पुगेका थिए ।
उनीहरुलाई आफू सक्दो सहयोग गर्ने बचन दिएका नेता नेपालले सोमबार माधव नेपाललाई फोन गरेका थिए । माधव नेपाल पनि जौरसिंपौवाको कार्यक्रममा रहेकाले र्फकंदा प्रदीप नेपालको निवासमा छिरेको स्रोतले बतायो ।
काठमाडौं । देशभर नोभेल कोरोना भाइरसका थप तीन हजार ११४ संक्रमित फेला परेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर तीन हजार ११४ संक्रमित थपिएका हुन् ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर २० जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्म देशभर कोरोना संक्रमणबाट एक हजार ४ जनाको मृत्यु भएको छ । देशभर आजसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या ३७ हजार ४७६ रहेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा तीन हजार १४२ जना देशभरका विभिन्‍न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । त्यसैगरी हालसम्म एक लाख ४१ हजार १३४ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
हालसम्म १४ लाख ८० हजार ९७८ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । जसम्म देशभर एक हजार २७७ जना क्‍वारेन्टिनमा रहेका छन् ।
यससँगै कुल संक्रमितको संख्या एक लाख ७९ हजार ६१४ पुगेको छ । शनिबार देशभर दुई हजार ५०८ कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका थिए भने दुई हजार २६४ जना डिस्चार्ज भएका थिए । शनिबार देशभर कोरोना संक्रमणबाट १७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
आइतबार देशभर दुई हजार ८२४ कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका थिए भने तीन हजार ६२० जना डिस्चार्ज भएका थिए । आइतबार देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट २३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
सोमबार देशभर दुई हजार ९३३ कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका थिए भने तीन हजार १५० जना डिस्चार्ज भएका थिए । सोमबार देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट २४ जनाको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक नबस्‍ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा सांसद तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य सूर्यबहादुर केसीको निधनको शोकमा कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक स्थगित भएको हो ।
केसीको गएराति ६३ वर्षको उमेरमा कास्कीको पोखरास्थित घरमै निधन भएको थियो । पदाधिकारी बैठक बस्‍ने समयमै केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बसेर सांसद केसीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरिने मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
“नेपाली कांग्रेसको परम्पराअनुसार केन्द्रीय समितिको इमरजेन्सी बैठक १ बजे बसेर शोक प्रस्ताव पारित गर्छौं,” उनले भने, “अन्य विषयमा छलफलले प्रवेश पाउँदैन ।”
यसअघि सोमबारबाट सुरु भएको पदाधिकारी बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको थियो । बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरेको विरोध पत्रमा छलफल हुने बताइएको थियो ।
हैदरावादलाई जित्‍नैपर्ने दबाब
काठमाडौं । यूएईमा जारी १३औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल अन्तर्गत आज मंगलबार सनराइजर्स हैदरावादले मुम्बई इन्डियन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ ।
सारजहाँ क्रिकेट स्टेडियमा हुने दुई टोलीबीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ७स्४५ मा सुरु हुनेछ । आजको खेलमा हैदरावादलाई जित्नैपर्ने दबाब छ ।
आजको खेलमा जित्न सके हैदरावादले प्लेअफमा स्थान बनाउनेछ । लिगमा १३ खेल खेलेको हैदरावादको १२ अंक छ । आजको खेलमा जित निकाल्न सकेमा हैदरावाद चौथो स्थानमा उक्लदै प्लेअफमा पुग्नेछ ।
मुम्बई पनि आजको खेलमा जित निकाल्दै आफूलाई शीर्ष स्थानमा बलियो बनाउने योजनामा छ । मुम्बई लिगमा १३ खेलमा १८ अंक जोड्दै शीर्ष स्थानमा छ । मुम्बई दुई खेलअगावै प्लेअफमा पुगेको थियो ।
अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा गोली प्रहार स् १ जनाको मृत्यु, कैयौं घाइते
भियना । अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा भएको गोली प्रहारबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ । गोली प्रहारबाट अन्य धेरैजना घाइते भएको अस्ट्रियाको गृह मन्‍त्रालयले जनाएको छ ।
अस्ट्रियाको गृह मन्‍त्रालयले यो आक्रमणलाई ुआतंकवादी हमलाु को संज्ञा दिएको छ । साथै प्रहरीको जवाफी कारबाहीमा एक आक्रमणकारीको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
अस्ट्रियाका गृहमन्‍त्री कार्ल नेहमाले यसलाई आतंकवादी हमला भनेका छन् । आक्रमण भियनाको सेन्ट्रल स्विडनप्लाट्ज स्‍कवायरमा भएको हो । गृहमन्‍त्रीले गोलीबारीको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार प्रहरीको जवाफी कारबाहीमा केही व्यक्तिको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ । साथै आक्रमणबाट धेरैजना सख्त घाइते भएको खबर छ ।
प्रहरीले भने आक्रमणकारीको खोजो भइरहेको जनाएको छ । यो आक्रमणविरुद्ध सुरक्षा बलले अपरेसन गरिरहेका छन् । यसका लागि सुरक्षा बलको संख्या बढाइएको छ ।
प्रहरीले सार्वजनिक स्थान तथा हमला भएको क्षेत्रमा नजानका लागि सर्वसाधारणलाई अपिलसमेत गरेको छ । साथै सार्वजनिक यातायातमा पनि जोगिएर यात्रा गर्नका लागि अनुरोध गरेको छ । आक्रमण भएको क्षेत्र सिटी सेन्टरलाई सुरक्षाकर्मीहरुले घेराबन्दी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्‍जालमा सार्वजनिक गरिएका भिडियो फुटेजमा मानिसहरु दौडिएर भागिरहेको देख्‍न सकिन्छ । खबरअनुसार गोलाबारी यहुदिहरुको एक प्रार्थना स्थल नजिकै रहेको सडकमा भएको हो ।
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप १८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट देशभर १८ जनाको मृत्यु भएको हो ।
सोमबार देशभर कोरोना संक्रमणबाट ९ जना र आइतबार देशभर कोरोना संक्रमणबाट २२ जनाको मृत्यु भएको थियो । हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६६३ पुगेको छ ।
काठमाडौं । देशभर नोभेल कोरोना भाइरसका थप तीन हजार ५५६ संक्रमित फेला परेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्‍वर गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर तीन हजार ५५६ संक्रमित थपिएका हुन् ।
देशभर आजसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या ३५ हजार ९१५ रहेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार ५०३ जना देशभरका विभिन्‍न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । त्यसैगरी हालसम्म ७८ हजार ७८० जना डिस्चार्ज भएका छन् । हालसम्म डिस्चार्ज हुने दर ६८ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।
देशभरका संस्थागत आइसोलेसन १५ हजार ४८ जना र होम आइसोलेसनमा २० हजार ८६७ जना रहेका छन् । आजसम्म देशभर ४ हजार ७९५ जना क्‍वारेन्टिनमा रहेका छन् ।
देशभर ६६ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहको छ । देशभर ३०७ जना आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको छ । यससँगै कुल संक्रमितको संख्या एक लाख १५ हजार ३५८ पुगेको छ ।
आइतबार देशभर दुई हजार ७१ कोरोना संक्रमित थपिएका थिए भने एक हजार ५५२ जना डिस्चार्ज भएका थिए । त्यसैगरी आइतबार देशभर २२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
सोमबार देशभर चार हजार ४७ कोरोना संक्रमित थपिएका थिए भने एक हजार ४७३ जना डिस्चार्ज भएका थिए । शनिबार कोरोना संक्रमणबाट थप ९ जनाको मृत्यु भएको थयो ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आइतबारका लागि बोलाएको केन्द्रीय कार्र्यसमिति बैठक स्थगित भएको छ । कांग्रेसले पूर्वकोषाध्यक्ष रामवावु प्रसाई ९खनुपरूदे प्रकाहा० को निधनको शोकमा आइतबारका लागि तय गरिएको केन्द्रीय कार्यासमिति बैठक स्थगित गरेको हो ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले पूर्वकोषाध्यक्ष प्रसाईको निधनको शोकमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिए । उनले स्थगित बैठक कहिले बस्ने भन्ने बारेमा भने मिति तय नभएको बताए ।
“अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने बारेमा मिति तय भएको छैन । नेताहरुसँग छलफल भएको छैन । एक–दुई दिनमै बैठकबारे निर्णय हुन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।
पूर्वकोषध्यक्ष प्रसाईको शुक्रबार काठमाडौंको ओक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सभापतित्वकालका कोषाध्यक्ष प्रसाईको १९७८ माघ १५ मा जन्म भएको थियो ।
प्रसाईको निधनको शोकमा कांग्रेसले आइतबार केन्द्र र मातहतका सबै कार्यालयहरु बन्द गर्ने भएको छ । यस्तै असोज २४, २५ र २६ गते तीन दिनसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका सबै कार्यालयहरुमा झण्डा आधा झुकाउने तथा १३ औं दिनसम्म केन्द्र र जिल्ला कार्यालयहरुमा शोक पुस्तिका राखिने मुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
कोरोना कहर ः माछा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुन कठिन
काठमाडौं । कोरोना भाइरसले माछा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुन कठिन देखिएको छ । सरकारले केही वर्षभित्रै दूध, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिए पनि तत्काल पूरा हुने नदेखिएको हो ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घले आयोजना गरेको दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनमा ‘कोरोनापछि पशुपालनको मुद्दा र समाधान’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पशु सेवा विभागका निर्देशक बंशी शर्माका अनुसार माछा, मासु, दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर नजिक देखिए पनि कोभिडले असर पुर्याउँदा समस्या भएको छ ।
कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रमै पशुपक्षीको योगदान ३० प्रतिशत छ । साठी प्रतिशत कृषक पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न छन् ।
निर्देशक शर्माका अनुसार पशुपालन क्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ “व्यावसायिक पशुपालन गर्न सक्दा गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ”, उनको भनाइ छ । कोभिड–१९ ले दूधमा पूर्णरूपमा असर पुगेको छ । माछा खाने संस्कृति पनि कम भएको छ ।